Isathelayithi iMeteosat: izici, ukusetshenziswa nokubaluleka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengamanje, kunokubaluleka okukhulayo komphakathi ngenxa yolwazi lwezehlakalo ezahlukahlukene kanye nemiphumela imiphumela emibi yemvelo enayo. Kuchazwa ngentshisekelo ejwayelekile ezindabeni zemvelo. Konke lokhu kugcina sekuthandwa ngenxa yokusatshalaliswa okukhulu kwemininingwane yezulu ngokusebenzisa iziteshi ezahlukahlukene zokusabalalisa emhlabeni jikelele. Ngefayela le- i-meteosat satellite Izithombe zingatholakala ngezinzwa ezifakwe ngemininingwane emihle kakhulu engasinikeza imininingwane enkulu ngemicimbi yesimo sezulu eyenzeka emkhathini ngesikhathi sangempela.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela ukuthi yiziphi izici nokubaluleka kwesathelayithi ye-meteosat.
1 Intuthuko kwezomkhathi
2 Izinzuzo zesathelayithi yezulu
3 Izici zesathelayithi zeMeteosat
Ngenxa yoshintsho lomhlaba wonke kunomkhuba okhulayo nesidingo sokuqonda kangcono izici zezulu zomkhathi. Izithombe ezitholakale ngezinzwa ezifakwe kuzingxenyekazi kanye nesathelayithi ye-meteosat zisetshenziselwa ukwenza okuthile ku udaba lokuvimbela, ukuxwayisa, ukunciphisa izinhlekelele nokubuyiselwa kwezindawo ezithintekile ngezinto ezahlukahlukene zemvelo ezikhona. Siyazi ukuthi ngokushintsha kwesimo sezulu izehlakalo zesimo sezulu esibi kakhulu ziyanda kokubili ngemvamisa nangamandla. Lokhu kwenza ukuzwa kude kube yithuluzi elibalulekile lokuhlaziya kanye nokuhlola izingozi zemvelo.
I-meteosat satellite isiza ukuba nezithombe eziningi ezingeni lomhlaba cishe ngesikhathi sangempela ezisiza ekwamukeleni imiphumela engahle ibe khona ngenxa yesimo semvelo. Isibonelo, ukuqhuma kwentaba-mlilo yase-Iceland u-Eyjafjallajokull kwahlukanisa yonke imithamo yezindiza engxenyeni enkulu yasenyakatho yeYurophu futhi kwaphoqeleka ukuba kusulwe izindiza ezingxenyeni eziningi zomhlaba. Lokhu bekuvinjelwe ngenxa yomnikelo wokuzwa kude usebenzisa i-meteosat satellite. Elinye icala ukuthi limele ukuthuthuka okukhulu ekuvikeleni abantu ekufikeni okuseduze kwe-cyclogenesis futhi kwaba negalelo ekuvikeleni impahla ebonakalayo nasekunciphiseni ukulahleka kwabantu.
Ngenxa yesiphuphutheki semeteosat, kuye kwenziwa izinhlelo ezahlukahlukene zokuxwayisa kusenesikhathi ukuxwayisa ngokuvela nokubonakala komlilo wehlathi. Ngale ndlela, izinhlelo zokuphatha zingenziwa ukuqeda umlilo nokunciphisa umonakalo ukuvikela kangcono imvelo. Ithuba lokwenza lezi zinhlelo zomlilo likhiqizwa ngenxa yezinzwa ezintsha ezivumela izinga lokushisa elikhishwa ebusweni bomhlaba ukuthi libanjwe.
Izinzuzo zesathelayithi yezulu
Nge-meteosat satellite sinohlelo lokwamukela ulwazi uma kuziwa ekubhekaneni nezifundo ezahlukahlukene zemvelo ezisetshenziswayo ekuhlaziyweni kwemicimbi ehlobene nezimo zemvelo ezimbi njengokungazinzi komkhathi ngokweqile, intaba-mlilo emkhathini, imililo emikhulu yehlathi, njll. Kumele siqonde ukuthi i-meteosat satellite inezinhlelo ezinhle zokuvimbela isimo sezulu.
Ukuyisebenzisa, kulandelwa izindlela ezahlukahlukene ezithile futhi kutholakala imiphumela esebenza njengomphelelisi wokwenza izinqumo ngabaphathi abanekhono emkhakheni wezemvelo. Ukubaluleka kwayo kukhulu kangangoba inikezela ngemininingwane edingekayo ukuze ikwazi ukulungiselela izibikezelo zesimo sezulu ezinembe kahle, kunciphise imiphumela engaba khona yalesi simo somkhathi endaweni. Lokhu kungaziwa ngenxa yokuzwa okukude kweziphepho ezinkulu nokuziphendukela kwazo okuqhubekayo.
Singaluthokozela futhi nothando lwemiphunga yomlotha wentaba-mlilo engaba yimbuyiselo enkulu emhlabeni futhi idale ukulahleka okungenakubalwa komnotho. Isibonelo, uma singakwazi ukusabalala komlotha wentaba-mlilo, singahlela thuthukisa ezokuthutha emoyeni nasemhlabeni futhi usebenzise indlela ejwayelekile yokubheka inqubekela phambili yamafu wentaba-mlilo. Singanciphisa futhi sivikele ukungcoliswa kwemvelo ngenxa yezinhlayiya zesulfure dioxide ezihlala zimisiwe ngemuva kokuqhuma kwentaba-mlilo.
Enye inhloso yesathelayithi i-meteosat ukukwazi ukuba nokuhlaziywa okuningana komphumela womlilo wehlathi kusukela lapho iqala khona ukuphela kwayo. Ngenxa yale satellite, kungenzeka ukuthi kuhlolwe umonakalo nezindleko zokuyilungisa. Ososayensi bahlose ukukhiqiza imidwebo yemidwebo yobungozi ehlanganisa ukuguquguquka okuningi okungachaza izimo ezahlukahlukene zezulu ezifundwe futhi zathanda imisebenzi yokubikezela, yokuphatha nokuhlela ehambisana nohlobo ngalunye lomcimbi. Njengoba ubona, Kuwusizo impela ukwazi ukwazi ukuthi kwenzakalani kwiplanethi yethu futhi sibukeze konke ngakho.
Ukuthuthukiswa okusimeme nakho kuyazuzisa ekuhlelweni kwendawo ngokubonga okuvulekile ekusatshalalisweni kwemininingwane yezwe esekelwa ngamapulatifomu ahlukahlukene wamahhala futhi avulekile.
Izici zesathelayithi zeMeteosat
Kuluhlu lwamasathelayithi we-geostationary alawulwa yi-EUMETSAT. Kunesikhala esisezimpambanweni zemeridian yeGreenwich nge I-Ecuador iya endaweni ephakeme ngamakhilomitha angama-35800. Ngenxa yesikhundla isathalayithi esikuyo, ingaba ne-orbit enesivinini sokuhumusha okuhambisana nokujikeleza komhlaba. Ngale ndlela, singahlala njalo sibona ingxenye efanayo yomhlaba. Yindawo ehambelana nombuthano ogxile eGulf of Guinea futhi ehlanganisa ama-degree angama-65 ebubanzi. INhlonhlo Yase-Iberia itholakala kuyo yonke le ndawo futhi kungakhethwa ukuthi kufundwe izici ezahlukahlukene zezulu ezingasithakazelisa.
Manje sizofunda ngendlela le satellite esebenza ngayo. Isebenzisa izithombe ze-VIS, IR ne-VA njalo ngehora lesigamu. Iyakwazi ukuthola izithombe njalo ngesigamu sehora ukuze sikwazi ukuthola isixazululo esihle sesikhashana sokuqapha izinto ezahlukahlukene zezulu ezifana nokusatshalaliswa nokwehluka kwesembozo sefu. Siyazi ukuthi amafu ngesinye sezici ezisemqoka zokwazi ukuvela kwesiphepho, isibonelo. Izithombe eziningana zitholakala njalo emva kwesigamu sehora ngemibukiso ehlukahlukene kagesi: Visible (VIS), Thermal Infrared (IR) kanye ne-Water Vapor Infrared (VA) ehambelana nezinhlobo ezintathu zezinzwa ezithwalwa yisathelayithi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesathelayithi ye-meteosat nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izinsimbi Zomkhathi » Isimo sezulu se-satellite